10-ka Ciyaartooy Ee Laga Yaabo Inay Katagaan Kooxdooda Marka Uu Suuqa Kala Iibsigu Furmo
HomeSuuqa10-ka Ciyaartooy Ee Laga Yaabo Inay Katagaan Kooxdooda Marka Uu Suuqa Kala Iibsigu Furmo
Waxaa dhawaan furmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartooyada, waxaana kaliya laga warsugayaa inta ka hadhsan bisha January ee sannadka cusub, waxaana jira xidigo badan oo katagi doona kooxahooda, iyagoo ku biiraya koox kale. Haddaba qormadeenan ayanu kusoo qaadan doonaa 10 ka ciyaartooy ee la filayo inay katagaan kooxahood kuwaasoo wada xaajood kula jira kooxo kale. liiskan ciyaartooyada tobanka ka kooban ayaana ah kuwa loogu hadal haynta badan yahay, iyadoo cadaynteedana laga warqabo arimo dhawra oo sabab u noqon kara tagitaanka ciyaartooyadan. Haddaba xidigahan ayaa kala ah sidan;
Xidiga koowaad waa Oscar: xidigan reer Brazil ayaana wadahal badankiisa laysla afgartay ugu wareegaya kooxda reer China ee Shangahai SIPG.
Xidiga labaad ee kooxdiisa katagaya bisha January, waa laacibka Memphis Depay oo loo badaniyo inuu tago kooxda Everton. Xidiga Saddexaadna waa Verrati: xidigan u safta PSG ayaa isna lagu waddaa inuu yimaadoo horyaalk Premeir League-ga, siiba kooxda Chelsea.
Xidiga afaraad waa Julian Draxiler: Xidigan reer Jarmal ayaana hore bishii June wadahadalo ula gashay kooxd Arsenal, balse xidigan ayaa hadda loo badaniyaa inuu yimado bisha January gagida Emartes, iyadoo waliba todobaadkii hore uu Ozil si khaas ah uga hadlay arinta xidigan kaasoo dalbaday in loo keeno kooxda Arsenal. Xidiga Shanaad waa Morgan Schneiderlin: Xidigan ayaana isna katagi kara kooxdiisa isagoo loo badinayo inuu Everton ka dego, marka suuqu ciyaartooydu furmo bishan January-2017.Xidig Lixaad waa Isco: Xidigan ayaan fursad fiican ka helin kooxda Real Madrid waxaana suurto gal ah inuu katago kooxdiisa, waxana raadcaynaysa kooxda Arsenal. Xidiga Todobaad waa Onyinye Wilfred Ndidi: da’yarkan reer Nigeria oo dalab fiican ka helay kooxda Leicester City, waxaana laga yaabaa inuu kasoo dego kooxdan difaacanaysa Premier League-ga.
Xidiga Siddeedaad waa Alexis Sanchez: xidigan ayaan heshiiska u kordhin wali Arsenal waxaanay isku maandhafsan yihiin qadarka lacageed ee uu qaadan doono heshiiska cusub, waxaana aad ugu gacan haadinaysa Chelsea oo la diyaara qadarka lacageed ee uu rabo. Xidiga Sagaalaad waa James Rodrigues: xidigan ayaa u badan inuu katago Real Madrid, xataa lagama yaabo inuu dhaafo maalmaha curashada sannadka cussub, waxaana sidoo kale la ogyahay inay Xiisaynayso kooxda Lacagta badan ee Chelsea. Xidiga Tobnaad waa Coutinho: xidiga reer Brazil ee qaabeeya khadka dhexe ee Liverpool ayaa muhiim u ah shaxda macalin Klopp, balse waxaa si wayn u rabta Man City oo Mushahar badan dul-haysa si’uu Ethihad Stadium uga soo dego.
Si kastaba ha ahaatee, liiska xidigahan ayaan la hubin go’aanadooda iyo inay sidan u dhacdo balse, waxaanu kasoo tixraacnay shabakada ka faaloota arimaha suuqa ciyaartooyda ee football Whispers, taasoo inta badan kawar haysa arimaha suuqa.